Ibhlog Juan Herranz › Iincwadi kunye neemuvi zomntu wonke.
Iincwadi onokuthi uziphose...
Kulungile, isihloko besibambile. Kuba into oza kuyifumana apha zezinye zeencwadi zomntu ogcina le blog. Kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi uya kufuna ukufunda ezinye zazo ngelixa use…Unazo ephepheni kwaye njenge-ebook. Abanye babo baye badlula kuhlelo lokusebenzisa kodwa…
Oomama, nguCarmen Mola
Umzuzu wesigwebo sokugqibela ufikile kuCarmen Mola. Ngaba uza kulandela umendo wempumelelo okanye abalandeli bakhe baza kumshiya nje ukuba ubuntloko bakhe bufunyenwe? Okanye…, ngokuchaseneyo, iya kuba yonke ingxolo eyenziwe yimvelaphi okanye hayi yababhali abathathu abasemva kwegama elingumng...
Onke Amahlobo Aphela, nguBeñat Miranda
I-Ireland inikezela ihlobo layo kwiGulf Stream ekwaziyo ukufikelela kwezo lathithudi zaseBritane, njengembonakalo engaqhelekanga yaselwandle, enamaqondo obushushu amnandi kakhulu kunawo nawuphi na omnye ummandla kulo mmandla. Kodwa ungaphazamisi, ukuba ihlobo lase-Ireland nalo linecala lalo elimnyama phakathi kohlaza olungenakuphela lwe…
Idangatye lasePhocaea, le Lorenzo Silva
Kufika ixesha apho ubuchule bombhali budalulwa. kokulungileyo kwe Lorenzo Silva kumnika ithuba lokubonisa izinto ezintsha zamabali angeyonyani, izincoko, iinoveli zolwaphulo-mthetho kunye neminye imisebenzi yentsebenziswano engalibalekiyo enjengeenoveli zakhe zamva nje ezinezandla ezine noNoemi Trujillo. Kodwa akukhe kube buhlungu ukuchacha...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zika-Asa Larsson
Into enxulumene nokudala isikolo esifanelekileyo kukuba ekugqibeleni kukho abafundi abaluncedo. Kwinkwali yeNordic engaphelelwa yohlobo olumnyama, u-Asa Larsson yenye yezo zithembiso zeminyaka elishumi eyadlulayo esele isekiwe phakathi kwabathengisi abaphambili bolu hlobo luchongwe ngemvelaphi. It…
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo nguMaría Oruña
Kunye nombhali uMaría Oruña, ipodium yangoku yababhali benoveli abamnyama eSpain yenziwa, indawo ehloniphekileyo awabelana nayo. Dolores Redondo kunye noEva García Sáez. Akunjalo ukuba ndithetha ukuba asifumani babhali abaninzi abahlakulela olu hlobo ngeetalente ezifanayo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ezi ...
Kuhlala kulungile ukungena kwi-surrealism eguqulwe yaba yinoveli ene-cadence ethile. Kwi-surreal kukho indawo yokomfuziselo, isafobe kunye neyokwenene xa ichukumisa. Kwaye kuyinyaniso ukuba uKurkov uyazi kakuhle. Lo mbhali waseUkraine uphonononga onke amathuba ale nto ifana nephupha, ukuyibiza ngandlela thile. …
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zeSantiago Gamboa
Ukungena kumsebenzi weSantiago Gamboa uhlala ebonelela ngombono wentlalontle yomyalelo wokuqala. Inqaku lelokuba iGamboa iyintsomi, kunjalo, kodwa loo mvelaphi yesincoko engalindelekanga inikezelwe kuthi ngobuchule ngabalinganiswa, iindlela zokubona imeko yentlalo, iinkcazo ezifafazwe ngalo mbono...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha243 Elandelayo →